Guddoomiye Caraale oo Beledweyne kula kulmey Saraakiil Mareykan ah – Radio Baidoa
Guddoomiye Caraale oo Beledweyne kula kulmey Saraakiil Mareykan ah
magaalada Beledweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan waxaa Maanta gaarey Saraakiil ka kala socotay dowladaha Mareykanka iyo Ingiriiska,waxaana soo dhaweeyey mas’uuliyiin ka tirsan Maamulka Gobolka Hiiraan.
Soo dhawyen kadib Sarakiisha oo dadaal ugu jira sidii Soomaaliya looga qaadi lahaa cunaqabateynta dhinaca hubka ah ee saaran ayaa waxaa ay kulan la qaateen Guddoomiyaha Gbolka Hiiraan Cali Maxamed Caraale.
Kulanka ayaa waxaa ay uga wada hadleen sidii Saraakiishaan uu Maamulka Gobolka Hiiraan ugala Shaqeyn lahaa qorshaha ay halkaasi u tageen oo ah inay qiimeyn ku sameeyaan Hubka laga isticmaalo iyo sidii Hubka yaalla dalka Soomaliya loogu istimaali lahaa sida sax ah oo waafaqsan Qeynuunka Hubka.
Kulanka oo saacado badan qaatay ayaa waxaa qeyb ka ahaa Saraakiisha Ciidamada Booliska Beledweyne uu horkacayay Taliyaha Saldhiga Booliska degmada Beldweyne Muuse Salaad Wehliye iyo Saraakiil kale.
Taliyaha ciidamada lugta oo sheegay in ciidamada xooggu u diyaar garoobeen inay Al-shabaab ugu tagaan meel kasta oo ay joogaan